Ogaden News Agency (ONA) – JWXO Waxay u Tahay Farxad, Itobiyana Taariikh iyo Dhaqan Cusub
JWXO Waxay u Tahay Farxad, Itobiyana Taariikh iyo Dhaqan Cusub
Waxay ahayd 26kii Bishii January 2014 markay Itobiya adeegsatay rag la kiraysto inay ugasoo qafaalaan magaalada Nairobi madaxda Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF). Maalintaa iyada ah dhamaan xubnaha ururka JWXO si aad ah ayay uga xumaadeen ugana murogoodeen halyeeyadaa sida khiyaanada ah looga afduubay dalkay martida u ahaayeen. Waxay gaar ahaan aad ula murugoodeen wareysigii ay BBC-da la yeelatay xaaskii mudane Sulub, marwo Qadra Cabdi, markay caalamka gaadhsiisay sidan;
“Ninkeyga isagoo jooga Twonka ayaa la afduubtay, waxaana afduubatay dowladda Ethiopia, aad ayaan uga naxsanahay, waxaa lala afduubtay Cali Axmed Xuseen, labadooda waxa ay ahaayeen mas’uuliyiin dalkooda difaacaya” ayeey tiri.
Maalin ka dib waa isagii daba-dhilif Cabdinoor oo isku sheegay inuu yahay La-taliyaha Cabdi iley ka sheegay idaacadaha hadal aad u qiimi liita, hasa ahaatee wax weyn kusoo kordhiyay xaalada. Wuxuu warbaahinta u sheegay in labada sarkaal ee ONLF ay “Nabad-qaateen” sida uu hadalka u dhigay, haatanna iyaga oo bad-qaba ay ku sugan yihii siduu sheegay Gobolka Ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia.
Hadalkaa uu yidhi Cabdinoor oo dawladda Itobiya ka cadhaysiiyay wuxuu fashiliyay qorshe kasta oo si qarsoodi ah loogu fulin lahaa masuulinta la afduubay. Waxaa kaloo uu taageero siiyay qadiyadii ka furantay maxkamadaha Kenya ee la horkeenay labadii nin ee booliska ahaa ee lagu fuliyay hawshan oo iyagu qirtay inay warmooge la adeegsaday ahaayeen.
Jabahdda ONLF waxay qaadatay qorshe uu Hogaanka Arimaha Dibadda masuul ka ahaa oo ahayd in caalamka la ogaysiiyo afduubkaa loo gaystay ergadii u joogtay Nairobi arimaha wadahadalka ee martida u ahayd dawladda Kenya, taasoo ay ku tilmaantay ONLF inuu ahaa xadgudub loo gaystay qaranimadii dalka Kenya, isla markaana ay dawladda Kenya masuul ka tahay nabadgalyada iyo soo daynta labadaa sarkaal. Dawladda Itobiya ayaa markii la weydiiyay ku jawaabtay in aanay wax war ah ka haynin arintan, inkastoo uu Cabdinoor ka sheegay idaacadda VOA inay goordhow ka hadli doonaan idaacadaha. Wuxuuna raaciyay ninkii u hadlayay Itobiya inay baadhitaan ku samaynayaan meesha ay ku sugan yihiin masuulintaasi.
Xusuusta dhacdadan waxaa ka mid ahaa barnaamijkii qiimaha lahaa ee laga sii daayay Ileys ee ku saabsanaa afduubka labadaa halyay oo ahaa sidan;
Hadaan intaa kaga gudubno, xasuusta qaar ka mid ahaa talaabooyinkii ay qaaday JWXO, waxaa iyada hubaal ah in aanay Itobiya waligeed si nabad ah kusoo daynin qof siyaasi ah oy xabsigeeda galay. Marka waa taariikh cusub oo Itobiya u bilaabatay, waxaanan rajaynaynaa inay siyaasiyiinta iyo shacabka dambi la’aanta ugu xidhan soo daayaan.
Dhamaan Xubnaha JWXO meel ay caalamka ka joogaanba waxay soo dhaweynayaan mudane Sulub iyo mudane Cali dheere, waxayna Ilaahay uga mahanaqayaan inuu kasoo daayay cadawgii afduubay. Guul iyo Gobanimo.